Umklamo Wemishini - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
IFumax Tech inikela ngezinsizakalo ezahlukahlukene zokwakhiwa kobunjiniyela. Singakha umklamo ophelele womshini womkhiqizo wakho omusha, noma singenza ukulungiswa nokuthuthuka kumklamo wakho okhona okhona. Singazanelisa izidingo zakho zokuklama ngomshini nethimba labanjiniyela abanamakhono amakhulu kanye nabaqambi abanolwazi oluningi ekuthuthukisweni komkhiqizo omusha. Isipiliyoni sethu sobunjiniyela bokwakhiwa kwemishini sinezigaba ezahlukahlukene zomkhiqizo, kufaka phakathi imikhiqizo yabathengi, amadivayisi wezokwelapha, imikhiqizo yezimboni, imikhiqizo yezokuxhumana, imikhiqizo yokuhamba neminye imikhiqizo
Sinezinhlelo ze-3D CAD zesimanje zokwakhiwa kwemishini, kanye namathuluzi / imishini eyahlukahlukene yokuhlaziywa kwemishini nokuhlolwa. Inhlanganisela yethu yonjiniyela abanolwazi namathuluzi wokuqamba ivumela iFumax Tech ukuthi ikunikeze idizayini eyenzelwe ukusebenza nokusebenza.
Ithuluzi lesoftware elijwayelekile: Pro-E, Works solid.
Ifomethi yefayela: step
Inqubo yethu yokuthuthukiswa kwemishini ifaka lezi zinyathelo ezilandelayo:
Sisebenza ngokubambisana neklayenti lethu ukuthola izidingo zomshini zomkhiqizo noma uhlelo oluthile. Izidingo zifaka usayizi, izici, ukusebenza, ukusebenza nokuqina.
2.I-Industrial Design (i-ID)
Ukubukeka kwangaphandle nesitayela somkhiqizo kuchaziwe, kufaka phakathi noma yiziphi izinkinobho nezibonisi. Lesi sinyathelo senziwa ngokufana nokwakhiwa kokwakhiwa kwemishini.
3. Ukwakhiwa kwemishini
Sakha isakhiwo semishini esezingeni eliphakeme somkhiqizo. Kuchazwa inombolo nohlobo lwezingxenye zemishini, kanye nesixhumi esibonakalayo kumabhodi wesekethe aphrintiwe nezinye izingxenye zomkhiqizo.
4. Ukuhlelwa kwe-Mechanical CAD
Sakha ukwakheka okuningiliziwe kwemishini ngayinye yezingxenye zomshini ngamunye kumkhiqizo. Isakhiwo se-3D MCAD sihlanganisa zonke izingxenye zemishini kanye nama-subassemblies kagesi kumkhiqizo.
5. Umhlangano wesibonelo
Ngemuva kokuthi siqedele ukwakheka komshini, izingxenye zomshini wesibonelo zenziwe. Izingxenye zivumela ukuqinisekiswa komklamo owenziwe ngomshini, futhi lezi zingxenye zihlanganiswe ne-elekthronikhi ukwenza ama-prototypes asebenzayo womkhiqizo. Sinikeza okusheshayo kwe-3D ukuphrinta noma i-CNC Amasampula ngokushesha njengezinsuku ezi-3.
6. Ukuhlolwa kwemishini
Izingxenye zemishini nezindlela zokusebenza ezisebenzayo ziyahlolwa ukuqinisekisa ukuthi ziyahlangabezana nezidingo ezisebenzayo. Ukuhlolwa kokuhambisana komenzeli kuyenziwa.
7. Ukwesekwa kokukhiqiza
Ngemuva kokuthi idizayini eyenziwe ngomshini ihlolwe ngokuphelele, sizokwakha ukukhishwa kwemishini yokwenziwa konjiniyela be-Fumax tooling / molding ukwenza isikhunta, ukuqhubekisela phambili umkhiqizo. Sakha amathuluzi / isikhunta endlini.